မဟာကာကြံဆစ်ပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်အသုံး - UpdateNew
July 30, 2020 Update New ကျမ္မာရေးနှင့်ဆိုင်သော 0
နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်သည် ဟူသောစကားအရ မြန်မာ့ဆေးပင်အစွမ်း အံမခန်း များစွာထဲမှ ဆေးပင်တမျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရလျှင်မဟာကာ ကြံဆစ်ဟုခေါ်သော နဂါးမြီးရွက် နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
မဟာကာကြံဆစ် ဟုခေါ်သော ထိုဆေးပင်ဧ။် အရွက်များသည် ခပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်၍ အကြောအစင်းများရှိသည်။ ရိုးတံတွင် အဆစ်ကလေး များပါရှိပြီး ထိုအဆစ်များမှ အရွက်ထွက်ပေါ်ကာ အရွက်ဧ။် အလယ် သို့မဟုတ် အောက်ခြေစွန်းစွန်းတွင် အမည်းစက် ကလေးများ ရှိတတ်သည်။
အပွင့်မှာ သေးသေးနှင့် ဖြူဖြူ ရှိပြီး အသီးမှာ အနက်ရောင်ရှိ၍ ခပ်သေးသေးဖြစ်သည်။ ချုံနွယ်ပင် တမျိုးဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သော နေရာတွင် ပေါက်ရောက်ခါ နေရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့တွင် လေးဘက်နာ ရောဂါများ ၊ ခြေဆစ် ၊လက်ဆစ် များ နာကျင် ကိုက်ခဲသော ရောဂါများခံစားကြုံတွေ့ နေရပါက မဟာကြံဆစ် အရွက်ကို ထုထောင်းခါ အရည်ညစ်၍ လိမ်းကျံစေပြီး အဖတ်များကို အုံထားပေး၍ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
အကောင်းဆုံးက အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် အ၀တ်ဖြင့် စည်းပေးပါက ပို၍ကောင်းပါသည်။ အဖတ်များ ခြောက်သွားသည်နှင့် ကိုက်ခဲနေသော ဒဏ်ရာများယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းချမ်းသာ စေပါသည်။ထို့အပြင် ဒူးနာ၍ လမ်းမလျှောက် နိုင်ဖြစ်နေ ပါကလည်း အရွက်အရိုးတို့ကို ထုထောင်း၍ အ၀တ်ဖြင့် စည်းနှောင်၍ အုံထားပေးလျှင် သက်သာပျောက် ကင်းပါသည်။
ထို့နောက် ရင်ကျပ်ခြင်း ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ စသော အဆုတ်ရောဂါများ ကိုလည်းကောင်း ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၊ အသားဝါရောဂါ ၊ အသည်းရောဂါ ၊ဆီးချုပ်ခြင်း ၊ ဆီးကျင်ခြင်း ၊ ဆီးနည်းခြင်း ၊ ဆီးဝါခြင်း၊ စသော ဆီးနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများကို လည်းကောင်း ၊ ၀မ်းကိုက်ခြင်း ၊ ၀မ်းလျှောခြင်း စသော ၀မ်းရောဂါများကို လည်းကောင်း ၊ အသည်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖောရောင်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း ခံစားနေရပါက မဟာကာ ကြံဆစ် ရွက်များကို ပြုတ်၍ သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ တချို့က သကြားထည့်၍ သောက်သုံးပါသည် ။
တချို့က ၄င်းအရွက်များကို အခြောက်လှန်းထားကာ ရေနွေးထဲတွင် လက်ဖက်ခြောက်အစား ၄င်းအရွက်ခြောက်များကို ထည့်၍သောက် ကြပါသည်။ တချို့က ထိုအရွက်အား သုတ်စားတတ် ကြပါသေးသည်။
အနာများ ဖြစ်ကြသော အနာစိမ်း ၊ ယားနာ ၊ ခူနာ နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနာမှန်သမျှ ရှိပါက ထို မဟာကာ ကြံဆစ်ဧ။် အရွက်ကို ထုထောင်း၍ ထိုအနာပေါ်တွင် အုံပေးထားပါက ပြည်ပေါက်၍ အသားနု တက်လာကာ အနာအမြန်ပျောက်ကင်း ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ယောင်ယမ်းကာ ပြည်တည်၍ ခွဲထုတ်ပစ်ရမည့် အနာများကို ၄င်းအရွက် အုံပေးထားခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ထို့အပြင် ငါးအရိုးစူးခြင်း ၊ ကင်းကိုက်ခြင်း ၊ ခြင်ကိုက်ခြင်း ၊ ပျားတုတ်ခြင်း ၊ ပုရွက်ဆိတ် နီကိုက်ခြင်း၊ ခွေးကိုက်ခြင်း ၊ သံစူးခြင်း ၊ ဓားရှခြင်း ၊ကဲ့သို့သော ထိခိုက်ရှနာများနှင့် အဆိပ်ဖြစ် စေတတ်သော ဒဏ်ရာမှန် သမျှကိုလည်း ထိုမဟာကာ ကြံဆစ်အရွက်ကို အရည်ညစ်၍ လိမ်းပေးလျှင်အမြန်ပျောက်ကင်း သွားပါသည်။ ငါးအရိုးစူးခြင်းတွင် ငါးကျီးငါးဧ။် အရိုးစူးမိပါက ပေါ့ဆလျှင် အသက်အန္တရယ်ပင် ကြုံတွေ့ရ တတ်ပါသည်။ ထိုငါးကျီးရိုး စုးမိပါက စူးမိသော နေရာသို့ မဟာကာ ကြံဆစ်ရွက်အရည်ကို သုတ်လိမ်းပေးပါက မိနစ်ပိုင်း အတွင်း လုံးဝ ပျောက်ကင်းပါသည်။
ဆီပူလောင်ခြင်း ၊ ရေနွေးပူလောင်ခြင်း ၊ စသော အပူလောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုလည်း အရွက်ကို ထုထောင်း၍ သုတ်လိမ်းပေးပါက အမာရွတ်ပင်မထင်တော့ဘဲ အမြန်ပျောက်ကင်း သွားတတ်ပါသည်။ သွားကိုက် ၊ နားကိုက် များဖြစ်လျှင်လည်း မဟာကြံဆစ် အရွက်အ၇ည်ကို ညစ်ထည့်၍ အဖတ်ကို ကိုက်နေသော နေရာ၌ ငုံထား အုံထားပေးလျှင် ပျောက်ကင်း ပါသေးသည်။
ထိုမဟာကာ ကြံဆစ်အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပေးခြင်းဖြင့် မောပန်းမှု နှင့် နာကျင်မှု ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းကာ ယခင်ကထက် ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ့ပါး သွက်လက်လာသော လက်တွေ့အကျိုးထူး ရရှိစေပါသည်။ ထိုသို့သော ရောဂါမှန်သမျှကို အမြန်ပျောက်ကင်းသော မဟာကာ ကြံဆစ် ဆေးပင်ကို နဂါးမြီး ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး တချို့ကလည်း နတ်ဆေးပင် ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
နှယျမွကျသဈပငျ ဆေးဖကျဝငျသညျ ဟူသောစကားအရ မွနျမာ့ဆေးပငျအစှမျး အံမခနျး မြားစှာထဲမှ ဆေးပငျတမြိုးနှငျ့ မိတျဆကျပေးရလြှငျမဟာကာ ကွံဆဈဟုချေါသော နဂါးမွီးရှကျ နှငျ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
မဟာကာကွံဆဈ ဟုချေါသော ထိုဆေးပငျဧ။ျ အရှကျမြားသညျ ခပျရှညျရှညျဖွဈ၍ အကွောအစငျးမြားရှိသညျ။ ရိုးတံတှငျ အဆဈကလေး မြားပါရှိပွီး ထိုအဆဈမြားမှ အရှကျထှကျပျေါကာ အရှကျဧ။ျ အလယျ သို့မဟုတျ အောကျခွစှေနျးစှနျးတှငျ အမညျးစကျ ကလေးမြား ရှိတတျသညျ။
အပှငျ့မှာ သေးသေးနှငျ့ ဖွူဖွူ ရှိပွီး အသီးမှာ အနကျရောငျရှိ၍ ခပျသေးသေးဖွဈသညျ။ ခြုံနှယျပငျ တမြိုးဖွဈပွီး စိုစှတျသော နရောတှငျ ပေါကျရောကျခါ နရောအနှံ့အပွားတှငျ တှရှေိ့ရပါသညျ။
မိတျဆှတေို့တှငျ လေးဘကျနာ ရောဂါမြား ၊ ခွဆေဈ ၊လကျဆဈ မြား နာကငျြ ကိုကျခဲသော ရောဂါမြားခံစားကွုံတှေ့ နရေပါက မဟာကွံဆဈ အရှကျကို ထုထောငျးခါ အရညျညဈ၍ လိမျးကြံစပွေီး အဖတျမြားကို အုံထားပေး၍ ပြောကျကငျးစပေါသညျ။
အကောငျးဆုံးက အိပျယာဝငျခါနီးတှငျ အဝတျဖွငျ့ စညျးပေးပါက ပို၍ကောငျးပါသညျ။ အဖတျမြား ခွောကျသှားသညျနှငျ့ ကိုကျခဲနသေော ဒဏျရာမြားယူပဈသလို ပြောကျကငျးခမျြးသာ စပေါသညျ။ထို့အပွငျ ဒူးနာ၍ လမျးမလြှောကျ နိုငျဖွဈနေ ပါကလညျး အရှကျအရိုးတို့ကို ထုထောငျး၍ အဝတျဖွငျ့ စညျးနှောငျ၍ အုံထားပေးလြှငျ သကျသာပြောကျ ကငျးပါသညျ။
ထို့နောကျ ရငျကပျြခွငျး ၊ ခြောငျးဆိုးခွငျး ၊ စသော အဆုတျရောဂါမြား ကိုလညျးကောငျး ၊ ကြောကျကပျရောဂါ ၊ အသားဝါရောဂါ ၊ အသညျးရောဂါ ၊ဆီးခြုပျခွငျး ၊ ဆီးကငျြခွငျး ၊ ဆီးနညျးခွငျး ၊ ဆီးဝါခွငျး၊ စသော ဆီးနှငျ့ပတျသတျသော ရောဂါမြားကို လညျးကောငျး ၊ ဝမျးကိုကျခွငျး ၊ ဝမျးလြှောခွငျး စသော ဝမျးရောဂါမြားကို လညျးကောငျး ၊ အသညျးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျ ဖောရောငျခွငျး ကိုလညျးကောငျး ခံစားနရေပါက မဟာကာ ကွံဆဈ ရှကျမြားကို ပွုတျ၍ သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးစပေါသညျ။ တခြို့က သကွားထညျ့၍ သောကျသုံးပါသညျ ။
တခြို့က ၎င်းငျးအရှကျမြားကို အခွောကျလှနျးထားကာ ရနှေေးထဲတှငျ လကျဖကျခွောကျအစား ၎င်းငျးအရှကျခွောကျမြားကို ထညျ့၍သောကျ ကွပါသညျ။ တခြို့က ထိုအရှကျအား သုတျစားတတျ ကွပါသေးသညျ။
အနာမြား ဖွဈကွသော အနာစိမျး ၊ ယားနာ ၊ ခူနာ နှငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာ အနာမှနျသမြှ ရှိပါက ထို မဟာကာ ကွံဆဈဧ။ျ အရှကျကို ထုထောငျး၍ ထိုအနာပျေါတှငျ အုံပေးထားပါက ပွညျပေါကျ၍ အသားနု တကျလာကာ အနာအမွနျပြောကျကငျး ကွောငျး တှရေ့ပါသညျ။ ယောငျယမျးကာ ပွညျတညျ၍ ခှဲထုတျပဈရမညျ့ အနာမြားကို ၎င်းငျးအရှကျ အုံပေးထားခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ထို့အပွငျ ငါးအရိုးစူးခွငျး ၊ ကငျးကိုကျခွငျး ၊ ခွငျကိုကျခွငျး ၊ ပြားတုတျခွငျး ၊ ပုရှကျဆိတျ နီကိုကျခွငျး၊ ခှေးကိုကျခွငျး ၊ သံစူးခွငျး ၊ ဓားရှခွငျး ၊ကဲ့သို့သော ထိခိုကျရှနာမြားနှငျ့ အဆိပျဖွဈ စတေတျသော ဒဏျရာမှနျ သမြှကိုလညျး ထိုမဟာကာ ကွံဆဈအရှကျကို အရညျညဈ၍ လိမျးပေးလြှငျအမွနျပြောကျကငျး သှားပါသညျ။ ငါးအရိုးစူးခွငျးတှငျ ငါးကြီးငါးဧ။ျ အရိုးစူးမိပါက ပေါ့ဆလြှငျ အသကျအန်တရယျပငျ ကွုံတှရေ့ တတျပါသညျ။ ထိုငါးကြီးရိုး စုးမိပါက စူးမိသော နရောသို့ မဟာကာ ကွံဆဈရှကျအရညျကို သုတျလိမျးပေးပါက မိနဈပိုငျး အတှငျး လုံးဝ ပြောကျကငျးပါသညျ။
ဆီပူလောငျခွငျး ၊ ရနှေေးပူလောငျခွငျး ၊ စသော အပူလောငျခွငျး အမြိုးမြိုးကိုလညျး အရှကျကို ထုထောငျး၍ သုတျလိမျးပေးပါက အမာရှတျပငျမထငျတော့ဘဲ အမွနျပြောကျကငျး သှားတတျပါသညျ။ သှားကိုကျ ၊ နားကိုကျ မြားဖွဈလြှငျလညျး မဟာကွံဆဈ အရှကျအရညျကို ညဈထညျ့၍ အဖတျကို ကိုကျနသေော နရော၌ ငုံထား အုံထားပေးလြှငျ ပြောကျကငျး ပါသေးသညျ။
ထိုမဟာကာ ကွံဆဈအရှကျပွုတျရညျကို သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ မောပနျးမှု နှငျ့ နာကငျြမှု ဝဒေနာမြား ပြောကျကငျးကာ ယခငျကထကျ ကိုယျခန်ဓာ ပေါ့ပါး သှကျလကျလာသော လကျတှအေ့ကြိုးထူး ရရှိစပေါသညျ။ ထိုသို့သော ရောဂါမှနျသမြှကို အမွနျပြောကျကငျးသော မဟာကာ ကွံဆဈ ဆေးပငျကို နဂါးမွီး ဟုချေါဆိုကွပွီး တခြို့ကလညျး နတျဆေးပငျ ဟု ချေါဆိုကွပါသညျ။
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်ကြည့်နည်း
UPDATENEW provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://updatenew.net/ (example – News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music …etc). Hope our vistors enjoy our website.
UPDATENEW.NET provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://updatenew.net/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
ငလျှင်၊လေကြမ်း ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ အင်္ဂတေမပါ ကျောက်ချပ်သားတွေနဲ့တည်ထားသည့် ရှေးဟောင်း စေတီလေးတစ်ဆူ
ခြေထောက်သွေးကျရော၊ အဖေါအရောင်၊ ဆီးကျောက်ကပ်အတွက် ရေထိကရုန်း